डा‍ सुन्दरमणी साेध्छन् – डा के.सी कहाँबाट परिचालीत छन् ? | mulkhabar.com
July 9, 2018 | 9:31 am 175 Hits
काठमाडाै, २४ असार ।
डा केसीका बारेमा मिडियामा एकतर्फी कुरा मात्र आईरहेको छ । यसमा कसैको चलखेल छ कि भन्ने आशंका छ । डा केसी कहाँबाट परिचालित छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । अब त्यसको पनि खोजी हुनुपर्छ ।
म पनि एक चिकित्सक हुँ । मेरो पेशाप्रति म जिम्मेवार हुनुपर्छ । विरामीको सेवा गर्ने मेरो दायित्व हो । त्यसैगरी डा गोबिन्द पनि चिकित्सक हुन् र उनको पनि विरामीप्रति उत्तरदायित्व छ । सरकारी तलब खाएपछि उनको दायित्व पढाउने, अप्रेशन गर्ने, संस्थाको ईज्जत माथि उठाउने, नयाँ नयाँ अनुसन्धान गरेर विद्यार्थीलाई अब्बल बनाउने उनको दायित्व हो । तर, उनी विगत ५ वर्षदेखि के गर्दैछन् त भन्दा आन्दोलन गर्ने, अनसन बस्ने र विद्यार्थीहरुलाई पनि आन्दोलन गर्न सिकाउने काम गरिरहेका छन् । सरकारी तलब खाएर अहिले सम्म उनले कति रिसर्च गरे रु कति विरामीको अप्रेशन गरे रु विद्यार्थीलाई राम्रो डाक्टर बनाउने कि मण्डलामा गएर आन्दोलन गर्न सिकाउने रु
माईतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न मिल्दैन भनेर भन्ने अनि आफैले थप मेडिकल कलेज खोल्न नपाईने भनेर सिन्डिकेट गर्न खोज्ने रु उनी कहाँबाट सञ्चालित छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । सरकारी तलब खाएर सरकारकै विरुद्ध आन्दोलन गर्न मिल्दैन । आन्दोलन गर्ने हो भने पहिला पदबाट राजीनामा गर्नु पर्यो । मैले पनि ०४६ सालको आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी हुँदा बीर अस्पतालको जागीरबाट राजीनामा गरेको थिए ।
डा। केसी अर्थोपेडिक डाक्टर हुन् । तर उनले के टिचिङ अस्पतालको आफ्नै विभागको स्तर माथि उठाउन सकेका छन् त रु डा। अशोक बाँस्कोटाहरुले निजी क्षेत्रबाट त्यति राम्रो काम गरिरहेका छन् तर केसीले के गरेका छन् रु चिकित्सा क्षेत्रको स्तर सुधारको कुरा गर्ने हो भने पहिला आफ्नै विभागको स्तर माथि उठाउन सक्नु पर्यो नि रु ख्वै त त्यो केही देखिदैन ।
अनसनको नाममा देशभरका अस्पताल बन्द गर्न लगाएर उनले के विरामीप्रति न्याय गरिरहेका छन् त रु उनको कारण अस्पताल बन्द भएर विरामी उपचार नपाएर मर्न बाँध्य भईरहेका छन् । यो नागरिकको मानवाधिकारको ठाडै उल्लंघन हो कि होइन रु यतातिर मिडिया, नागरिक समाजले किन मुख खोल्दैनन् रु
५ वर्ष अघिदेखिको मुद्दा अहिले उठाएर उनले मुलुकको परिवर्तनलाई नकार्न खोजिरहेको देखिन्छ । ५ वर्ष अघि उनले जुन मुद्दा उठाए, त्यो अहिले काम नलाग्ने भईसक्यो । यसबीचमा मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएर तीन तहको सरकार गठन भईसकेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मा लगाईएको छ भने कुन प्रदेशमा कति मेडिकल कलेज खोल्ने वा नखोल्ने अधिकार प्रदेशको हो नि रु अनि डा। केसीले संविधानको यो अधिकारलाई रोक्न मिल्छ रु यसरी उनले संविधानको उल्लंघन गरिरहेका छन् । उनको यो मुद्दाका कारण करोडौ डलर विदेशि रहेको छ । विद्यार्थीहरु बाँध्य भएर विदेशमा डाक्टर पढ्न जानु परिरहेको छ ।
अनसनको नाममा देशभरका अस्पताल बन्द गर्न लगाएर उनले के विरामीप्रति न्याय गरिरहेका छन् त रु उनको कारण अस्पताल बन्द भएर विरामी उपचार नपाएर मर्न बाँध्य भईरहेका छन् । यो नागरिकको मानवाधिकारको ठाडै उल्लंघन हो कि होइन रु यतातिर मिडिया, नागरिक समाजले किन मुख खोल्दैनन् रु माईतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न मिल्दैन भनेर भन्ने अनि आफैले थप मेडिकल कलेज खोल्न नपाईने भनेर सिन्डिकेट गर्न खोज्ने रु उनी कहाँबाट सञ्चालित छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
सरकारी तलब खाएर सरकारकै विरुद्ध आन्दोलन गर्न मिल्दैन । आन्दोलन गर्ने हो भने पहिला पदबाट राजीनामा गर्नु प¥यो । मैले पनि ०४६ सालको आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी हुँदा बीर अस्पतालको जागीरबाट राजीनामा गरेको थिए । अनि डा। बाबुराम भट्टराईलाई पनि थाहा हुनुपर्ने हो कि प्रोफेसन मान्छेले आफ्नो प्रोफेसन गर्नुपर्छ । आफ्नो प्रोफेसन नगर्ने डा। केसीलाई बाबुृरामले साथ दिन सुहाउँछ रु खैर उनले त पार्टी नै खोलेका छन् ।
अनि अर्को कुरा, डा। केसीले दोहरो चरित्र देखाएका छन् । आफ्नो नागरिकतामा फरक फरक जन्ममिति हुँदा चाहिँ त्रुटी भयो भन्ने अनि पूर्व प्रधानन्यायाधिश गोबिन्द पराजुलीको त्यै कुरा हुँदा धारे हात लाउने उनी नै होइनन् ? डा केसीको यो दोहरो मापदण्ड हो ।